माता लक्ष्मीका ८ रुप : कस्को पूजा गर्दा के प्राप्त हुन्छ ? - Nagarik Today
होम » माता लक्ष्मीका ८ रुप : कस्को पूजा गर्दा के प्राप्त हुन्छ ?
माता लक्ष्मीका ८ रुप : कस्को पूजा गर्दा के प्राप्त हुन्छ ?
विद्याका लागि सरस्वतीको पूजा गरेजस्तै धनका लागि लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ । कालरात्रीमा त लक्ष्मीको झन विशेष पूजा गरिन्छ ।यो मान्यता रहेका छ कि देवी लक्ष्मीको पूजा गर्नाले घरमा धन सम्पत्ति भित्रिन्छ । धर्मग्रन्थमा देवी लक्ष्मीका अनेक रुपको चर्चा गरिएको छ ।माता लक्ष्मीले ८ रुपमा मानिसलाई जीवनका सुख प्रदान गर्ने विश्वास गरिन्छ । यी हुन देवी लक्ष्मीका ८ रुप, कसको पूजा गर्दा के फल प्राप्त हुन्छः
वीर लक्ष्मी:लक्ष्मीको यो रुपको पुजा गर्नाले सबै प्रकारका भयबाट मुक्ति मिल्छ र ऋणहरुबाट छुटाकारा पाइन्छ । लक्ष्मीको यो रुपका भक्तहरुलाई खराब शक्ति र तन्त्रमन्त्रको नराम्रो प्रभाव हुँदैंन् ।गज लक्ष्मी:देवी लक्ष्मीको यो रुपमा पुजा गर्नाले मान सम्मान मिल्छ । नोकरीमा प्रमोशन वा राजनीतिमा उच्च पद प्राप्त गर्नका लागि यो रुपको पुजा गर्नु राम्रो मानिन्छ ।
सन्तान लक्ष्मी:माता लक्ष्मीको यो रुपको पुजा गर्नाले सन्तान सुख मिल्छ । सन्तानको लामो आयु र उसको उन्नतिका लागि सन्तान लक्ष्मीको पुजा गर्नु श्रेष्ठ मानिन्छ ।धान्य लक्ष्मी:जो ब्यक्ति लक्ष्मी देवीको यो रुपको पुजा गर्छ, उसको घरमा अनाजको कहिल्यै कमी हुँदैंन् । कृषिको काम गर्नेले धान्य लक्ष्मीको पुजा गर्नु राम्रो मानिन्छ ।
विजय लक्ष्मी:कुनै काममा सफलता प्राप्त गर्नका लागि विजय लक्ष्मीको पुजा गर्दा राम्रो मानिन्छ । अदालतमा मुद्धा जित्नका लागि पनि देवीको यही रुपको पुजालाई श्रेष्ठ मानिन्छ ।आदि लक्ष्मी:लक्ष्मी माताको यो रुपको पुजा गर्नाले परिवारमा सुख शान्ति बनिरहन्छ । रोगबाट मुक्ति मिल्छ भने दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाउनका लागि पनि लक्ष्मीको यो रुपको पुजा राम्रो मानिन्छ ।
ऐश्वर्या लक्ष्मी:सबै प्रकारका भौतिक सुख सुविधाका लागि लक्ष्मीको यो रुपको पुजा गरिन्छ । ऐश्वर्या लक्ष्मीको पुजा गर्नाले आकर्षण शक्ति पनि मिल्दछ ।धन लक्ष्मी:धन सम्पत्ति चाहनेहरुले धन लक्ष्मीको पुजा गर्दा राम्रो मानिन्छ । लक्ष्मीको यो रुपको पुजा गर्नाले घर सम्पूर्ण रहन्छ र धनको कमी कहिल्यै हुँदैंन् । व्यापार-व्यवसायमा पनि सफलता मिल्छ ।
goddess laxmilaxmi bhagwanlaxmi mata